Sampatti News के तपाईको घरमा किचकिचे सासू छिन् ? अपनाउनुस् यस्ता विधि - Sampatti News
के तपाईको घरमा किचकिचे सासू छिन् ? अपनाउनुस् यस्ता विधि
काठमाडौँ । पहिलै देखि हामीले सुन्दै र देख्दै आएको कुरा हो कि सासु र बुहारीको सम्बन्ध असाध्यै नाजुक हुन्छ । प्राय परिवारमा सासु र बुहारीबीच थुप्रै उतार–चढाव आउँछन् । श्रीमान र श्रीमतिबीच त यस्ता थुप्रै उतारचढाव आउँछन् भने सासु बुहारीमा त यो कुनै नौलो कुरा नै भएन । थुप्रै पटक स्थिती सहज बनिदिन्छ र दुई बीचको सम्बन्ध निकै प्रगाढ हुन्छ भने कहिलेकाँही कुनै एकको स्वभावले स्थितीलाई राम्रो बन्नबाट रोक्छ । यस्तै स्थिती त्यतिबेला पनि निम्तिन्छ जब बुहारीले चलाख सासू पाउँछन् र सधैंभरी बुहारीको नकारात्मक पक्ष मात्रै खोज्ने गर्छन् ।
एउटा कुरा साँचो हो कि सासु चाहे जस्तो सुकै होउन् तर उनीहरु छोराका लागि एक निकै केयरिङ आमा हुन्छन् । यस्तोमा उनीहरुलाई आफ्नै जीवनको हिस्सा बनाउँदा बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसो भए यस्ता स्थितिसँग जुध्न के गर्ने त ? आउनुहोस्, यस्ता टिप्स अपनाउनुस्
हो, सुपर अलर्ट हुनुहोस् । तपाईंकी सासुले तपाईंलाई के भनिरहेकी छिन् ? किन भनिरहेकी छिन् ? के गरिरहेकी छिन् रु यो विषयमा थोरै सजग रहँदा कुनै ठूलो कुरा मान्नु पर्दैन । यसो गर्दा तपाईं पहिला नै सासुको मनसाय बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो विवेकले निर्णय लिँदै स्थितीलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई बिना कारणको झगडाबाट जोगाउँछ भने आफूलाई कुनै भयानक स्थितीमा फस्नबाट पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ ।